Dowladda Somaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay dagaalkii ka dhacay Jowhar | Banaadir Times
HomeUncategorisedDowladda Somaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay dagaalkii ka dhacay Jowhar
Dowladda Somaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay dagaalkii ka dhacay Jowhar
Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xundubeey Jimcaale ayaa marka hore ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay dagaalkii Magaalada Jowhar ku dhex-maray Ciidamada Ammaanka iyo Maleeshiyaadka Macawiisleeyda.
Wasiirka oo qeyb ka ahaa Mas’uuliyiintii Maanta Muqdisho kusoo dhaweeysay Madaxweynaha Hir-Shabeelle ayaa waxaa uu sheegay in dhibaatadii ka dhacday Magaalada Jowhar ay mas’uul ka ahaayeen dad fidno wadayaal ah.
“ Waxaan hubnay in Madaxweynaha Hir-Shabeelle uu noqon lahaa Madaxda ugu horeeysa ay imaan lahaa Muqdish,balse dhibaatooyinkii dhacay ayaa dib u dhigay, dowladana waa ay garawsan tahay arrintaas ayuu yiri’ Wasiir Xundubeey.
Laamaha Amniga Magaalada Jowhar ayaa dagaalkii halkaasi ka dhacay waxaa ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen maleeshiyaad Burcad ah oo dhac & dhibaatooyin kale ka geysan jiray Galbeedka Magaalada jowhar.
Previous articleDagaal ka socda degmada Walanweyn ee Gobolka Shabellaha Hoose
Next articleBooliska oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay degmada Walanweyn